Iphrofayela Inkampani - Xizi Elevator Co., Ltd
Xizi Elevator CO., LTD kuyinto inkampani yakwa-ephethwe of Xizi UHC, ne brand name of "Xizi" (ngokuthi "Xizi"). Inkampani lihlasela izimakethe ephezulu, kuhloswe ngaso isenzakalo esiphawulekayo amasu ka ikheshi zebhizinisi Xizi UHC. I Xizi brand kungaba emuva eyabhalwa kuya ngonyaka ka-1981 Kuze kube manje, lo brand ekhulwini cross-iye yadonsa iminyaka engaphezu kuka-30, futhi uye walungiselela esivelele kunazo isakhiwo zokuthutha izixazululo emazweni angaphezu kuka-60 kanye nezifunda emhlabeni, njalo unqobe ukuqashelwa emakethe futhi ithemba umaqondana. Xizi okuhambisana kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni, njalo efuna ngibuyela Fundament, ngokuletha imikhiqizo ephelele ngesikhathi ngihlala kweqiniso mission.
Indlunkulu ye Xizi sise inala ye Qingshan Lake baziwa ngokuthi 'u-Green-Silicon Valley ". Le nkampani ine capital ababhalisiwe RMB kwezigidi ezingu 2.155 yuan futhi mayelana nabasebenzi 3,000. Kuyinto ehola ephezulu ikheshi ibhizinisi eChina, bagxile design ihlanganiswe, R & D, ukukhiqiza, ukumaketha, ukufakwa kanye emva-sales service imikhiqizo esizihambelayo. Imikhiqizo lenkampani kuhilela umgibeli ikheshi, udladla panoramic, Machine roonless elevaror, udladla esibhedlela, nempahla ikheshi, esizihambelayo, ngendlela yokuhamba, ikhaya ikheshi njll, 8 uchungechunge futhi phezu 10 izinhlobo ikheshi.
Le nkampani iye walubhada kuleli umkhakha iminyaka ecishe ibe ngu-35 edlule, has okuqinile ucwaningo lwesayensi futhi amandla emisha. Manje-ke anazo ezingaphezu kuka-300 izisebenzi lobuchwepheshe, amaphrojekthi patent 60, sithembisa 20 ucwaningo kanye nezinye izinhlelo zentuthuko ukhiye kanye ukwethulwa 3 noma 4 imikhiqizo emisha averagely ngonyaka. Okwamanje, le nkampani corporately usethe Xizi Research Institute Zhejiang University Zhejiang University. Ukubambisana kabanzi namanyuvesi odumile ezifana Tsinghua University futhi Shanghai Jiaotong University, Xizi isungule R & D isikhungo, ukukhiqizwa & womshini yayo isikhungo, ezintathu inkundla izinga ukuhlolwa isikhungo ngokuhamba ukuphishekela lunye imikhiqizo, sesimanje yokukhiqiza kanye kweNdikimba ibhizinisi. Ukunamathela welithi "Intuthuko ne-Times, Ukuqamba okuqhubekayo", inkampani igcina njalo ukuncintisana eqinile.
Le nkampani isivele eliqinisekiswe yi ISO9001 Quality Management System, ISO14001 Environmental Management System, OHSAS18001 Umsebenzi Wezempilo Nokuphepha Management System kanye emakethe ukuvuma izitifiketi ezingeni eliphakeme kunawo wonke emhlabeni, ezifana CE isitifiketi-EU emakethe ukuvuma komkhiqizo ehola, CSA isitifiketi North Melika emakethe ukuvuma, njll inkampani possesses yokukhiqiza ilayisensi ezingeni eliphezulu e imboni yasekhaya kanye ukufakwa level A, uguquko kanye imvume yesondlo.
Inethiwekhi ukumaketha lenkampani wakha iphethini esimeni lapho "Omunye indlunkulu, izifunda enkulu emihlanu", nemikhiqizo ukunweba phezu zonke izingxenye zezwe. Xizi umise ukusebenza kwamahhovisi egatsha 34 28 ejensi emadolobheni ahlukahlukene emaphakathi, ezifana Hangzhou, Jinan, Changsha, Xiamen, Chengdu, Chongqing, Tianjin, Xi'an, Hefei futhi Nanjing, njll, ukwenza ukuhlinzeka "sokuma" full-service amakhasimende. amadivayisi ikheshi lithunyelwa amazwe 70 nezindawo kuhlanganise eYurophu, eMpumalanga Ephakathi, eNingizimu-mpumalanga Asia nase-Australia, njll Okwamanje, inkampani isungule ejensi ahlukahlukene okukhethekile futhi eside ababambe iqhaza kwezolimo ngokuBambisana kwakhiwa a ezimisiwe oversea yokuthengisa uhlelo service.
"Ozithobayo yesevisi ye ikheshi ngamunye, ukuhlinzeka ephephile kanye nemikhiqizo kumakhasimende nanini" iyona ifilosofi zebhizinisi Xizi. Inkampani ephikelela umoya ibhizinisi ekuphishekeleni ephikelelayo ukuphepha, ukusebenza kahle, amandla ukulondoloza nenduduzo imikhiqizo, ukuze uhlinzekele lomhlaba ubuchwepheshe, umkhiqizo kanye service kumakhasimende.